Sidee loo soo sheegaa Waxyaabaha Qarsoodiga ah ee Xogta badan leh? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 531
Barta Twitter-ka, haddii Isticmaaluhu arko sawiro iyo fiidiyowyo Tweets-ka aad u aragto in loola dhaqmo sida Nuxurka Qarsoodiga ah, sida ku cad Siyaasadda Mawduuca Macluumaadka ee Twitter, waxaad leedahay waajibaad iyo xaq inaad u soo gudbiso Twitter.
Isticmaalaha, si cambaareyn Sawirro iyo fiidiyowyo kujira Tweets, waa inaad: Meel heshaa Tweet-ga aad rabto inaad ka warbixiso twitter.com ama codsiga Twitter-ka ee iOS ama Android, guji; dooro Warbixin Tweet, guji; Xullo Tweet-kan waxaa ku jira sawir qarsoodi ah, guji.
In shabakadda bulshada ee Twitter warbixinnada Tusmada Multimedia oo ay ku calaamadeeyeen Isticmaalayaasha inay cadeeyaan inay u baahan yihiin farriin digniin ah si ay ugu hoggaansamaan Xeerarka Multimedia ee Xeerarka Twitter.
Xakamee Daawashada Sawirada Qarsoodiga ah iyo Fiidiyowyada Tweets
Haddii Isticmaalaha Twitter-ka uu damacsan yahay inuu wax ka beddelo astaamihiisa / keeda Sawirro iyo Fiidiyowyo ku jira Tweets; Marka hore, waa inaad gasho twitter.com, madax ka noqo si aad u aragto tilmaamaha adoo dooranaya astaantaada PC-ga oo aad raaceyso.
Marka loo eego tilmaamaha, Isticmaalaha Twitter-ka: Hel meesha menu navigation ama astaanta astaantaada guud, dooro Settings iyo asturnaanta, dhagsii; Qarsoodiga iyo amniga, guji; xulo Amniga, dhagsii; oo dooro Muuji sawirro iyo fiidiyowyo ay ku jiri karaan macluumaad sir ah, keydso.
Lagu dhammaystiray nidaamka, iyo Isticmaalaha ku wargeliyey madal Twitter la xiriira Mawduucan oo kale. Twitter ayaa calan ka dhigan doonta, laakiin maheli doontid fariin digniin ah ama si toos ah iskood iskaga saaraan websaydhka Waxaa la filayaa inuu ka noqdo qoraaga.
KHIBRADDAADA UU LEEYAHAY TWITTER
Twitter wuxuu siiyaa Isticmaalaha jawi dalwaddii kaamil ah in la wadaago fikradaha iyo macluumaadka caalamiga ah; Sababtaas awgeed, barxadani waxay ballan-qaadaysaa qalab lagu xakameynayo waxa adeegsadaha Twitterku arko iyo waxa dadka kale u arkaan Isticmaalaha.
Marka Isticmaaluhu wuu awoodaa kalsooni ku muuji Barta Twitter-ka, waa inaad wax ka qabataa tallaabooyinka la xiriira Tweetka, sida: Riixida dusha sare ee Tweet-ga aad rabto, helitaanka fursadaha kala duwan ee ay bixiso Twitter si toos ah waqtigaaga bilowga.
Kuwaas xulashooyinka ayaa loo gudbiyaa a: Jooji socda, ogeysiisyada shaandhaynta, muuji wax ka yar soo noqnoqoshada, aamusnaanta, xannibaadda, soo sheegida, dooro nooca noocyada maaddooyinka badan ee aad rabto inaad ku aragto Tweets-ka dusha sare.
Sida loo xakameeyo waxa Isticmaalayaasha kale ay aniga iiga arkaan Twitter-ka?
Isticmaalayaasha Twitter-ka waxay leeyihiin aalado iyo xulashooyin kala duwan oo Twitterku ballan-qaadayo; oo leh, adeegsadaha Twitter xakameyn karo waxa Isticmaalayaasha kale u arkaan isaga wadahadal, isdhexgal, iwm.
Si loo xakameeyo, Isticmaalaha waa la soo jeediyay ilaali Tweets-kaaga, kaliya kuwa raacsan ayaa arki doona; sumad sawir, go'aan ka gaadh haddii aad u oggolaato qofna inuu ku sawiro sawirradaada, kaliya saaxiibbadaada ama isticmaaleyaasha Twitter-ka midna; aragti, beddel dejinta Koontada si aysan u muuqan.
Isticmaaluhu wuu go'aansan karaa haddii la wadaag goobtaada ku jira Tweets; Twitter wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad ku dooran karto Tweet kasta haddii aad rabto inaad ku darto goobtaada; Halkan waa inaad tixgelisaa suurtagalnimada inaadan aqoon dhammaan kuwa raacsan, waa inaad taxaddar yeelataa.
1 Xakamee Daawashada Sawirada Qarsoodiga ah iyo Fiidiyowyada Tweets
2 KHIBRADDAADA UU LEEYAHAY TWITTER
3 Sida loo xakameeyo waxa Isticmaalayaasha kale ay aniga iiga arkaan Twitter-ka?